Kenya oo ciidan soo gelisay Soomaaliya kadib markii ay sameysay mar-marsiiyo | Xaysimo
Home War Kenya oo ciidan soo gelisay Soomaaliya kadib markii ay sameysay mar-marsiiyo
Dowladda Kenya ayaa sheegtay iney ku raad joogto saddex qofood oo aan Muslim aheyn oo laga soo afduubtay magaalada Mandhera, waxeyna sabab uga dhigeen in ciidamadooda ay soo galaan gobolka Gedo.
Sida ay wararka sheegayaan saddex qofood oo aan Muslim aheyn ayaa laga soo afduubtay Mandhera, bus ay saarnaayeen 54-qofood ayaa lagala dagay dadkaas, iyadoo loo maleynayo iney dadka falkaas geystay yahiin Al-Shabaab.
Taliyaha Booliiska Gobolka Waqooyi Bari Rono Bunie ayaa u sheegay warbaahinta caalamka in laamaha amaanka ay ku raad joogaan afduubayaasha.
“Waan ognahay saddexda qof ee baska lagala dagay, si cajiib ah ayuu weerarka u dhacay, waan raadineynaa, dadaal ayaan wadnaa, waana inaan nolosha ku helno,” ayuu u sheegay AP.
Taliyaha wuxuu qirtay iney qalad aheyd in gaariga bas-ka ah uu baxo ilaalo la’aan iyadoo dagaalyahanada Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ay goobahaas aad ugu badan yahiin kana geystaan falal kala duwan.
Ciidamada Kenya oo aan aheyn kuwa nabad ilaalinta u jooga qeybo ka mid ah koonfurta dalka ayaa soo galay, waxeyna marmarsiyo ka dhiganayaan iney baadi goobayaan afduubayaasha ay ku tuhunsan yahiin Al-Shabaab.
Si kastaba xiisado ayaa ka taagan Gobolka Gedo iyadoo ciidamada Kenya ay halkaas ka geysteen falal argagax leh, waxaana jira dhaq-dhaqaaqayo ciidan oo halkaas ka jira.